Imigangatho ye-5G yeemoto ezikrelekrele kunye nemizi-mveliso eza kufika kunyaka olandelayo | I-Androidsis
Imigangatho ye-5G yeemoto ezintle kunye neefektri ezifanelekileyo ukufika esiphelweni se-2019
Umgangatho wesibini weenethiwekhi ze5G uya kusekwa ngoDisemba wonyaka olandelayo kwaye iya kuvula iingcango zeemoto ezixhumeneyo kunye neefektri ezikrelekrele, ngokweSamsung.
Ukuthetha kwi-5G nkqo yeNgqungquthela 2018 eSeoul, uSungho Choi, usekela-mongameli weshishini lokunxibelelana kwi-Samsung Electronics, wathi umgangatho wesibini we-5G, okanye ukumiliselwa kwe-16, kuya kugqitywa ngoDisemba wonyaka olandelayo kwaye ziya kusiwa kwi-International Telecommunication Union (i-ITU).
I-3GPP ivume umgangatho we-5G ongazimeleyo (NSA) ngoDisemba kunyaka ophelileyo, kunye ne-standard standard ye-5G (SA) ngoJanuwari kulo nyaka, egcwalisa inguqulelo ye-15. Inguqulelo ye-15 yenzelwe ukuxhasa i-Broadband ephuculweyo yeselfowuni (eMBB), unxibelelwano oluthembekileyo lwe-low-latency (URLLC), kunye nonxibelelwano lohlobo loomatshini. ( mMTC) kwinethiwekhi enye ukuhlangabezana nokwamkelwa kweshishini kwi-Intanethi yezinto (IoT). Ikwahambelana ne-28 GHz millimeter wave (mmWave) kunye neetekhnoloji ze-eriyali ezininzi.
Uhlobo lwe-16 luya kongeza imigangatho yeemoto eziqhagamshelekileyo, iifektri ezifanelekileyo, ishishini kunye nenethiwekhi yabucala, kunye nokhuseleko loluntu ukuhlangabezana neemfuno zamashishini ahlukeneyo. «Iimoto ze-Smart kunye neefektri zifuna umgangatho we5G owenzelwe ushishino lwabo »UChoi uthe. (Fumanisa: Isamsung yazisa inguqulelo yeGPS S10 ene5G).
Iinkampani zeemoto kunye ne-IT zenza i-5G Automobile Association eza kuthi isebenzisane ne-3GPP ukuyila imigangatho yezithuthi ezimeleyo. Kwiifektri ezikrelekrele, umanyano lwe5G lweMizi mveliso edityanisiweyo kunye neZenzekelayo (i5G ACIA) idlala indima efanayo.
Umgangatho wesibini uya kuba nomgangatho kwimithombo yeendaba, kubandakanya ifomathi kunye noxinzelelo, utshilo u-Choi.
Umgangatho we-LTE awuphelanga ngo-2010 kuphela, ukongeza imigangatho efana neeseli ezincinci ukuqhubeka nokuhlangabezana neemfuno zamashishini. Ukumiselwa komgangatho we-5G sele kuqalile kwaye kuya kuqhubeka ukuvela ukuze kudlale indima ephambili kuhlaziyo lwesine lweshishini.
Ishishini lothungelwano lweSamsung ukubheja kwinethiwekhi ye5G ukwandisa ubukho bayo kwindawo, kwihlabathi jikelele, iNokia kunye neNokia kudala baba ngabadlali abaphambili kwaye I-Huawei ibonise ukunyuka kweemeteor.
Kutshanje, abasebenza ngefowuni baseMzantsi Korea i-SK Telecom bayikhuphele ngaphandle i-Huawei kwabo bakhetha ukubiza ixabiso kwinethiwekhi ye-5G kwaye bomeleze ubambiswano lwabo ne-Samsung. I-KT ikhutshele ngaphandle umthengisi waseTshayina kulowo uzinikele kuye, ngelixa i-LG Uplus iyifakile.
Isamsung ilindele ukuba isibuko se-28 GHz, apho somelele ngaphezu kwe-3.5 GHz, siya kusetyenziswa ekuhanjisweni kwe5G SA kunyaka olandelayo ukuyinika Ukhuphiswano ngaphezu kweHuawei.
Inkqubo ye-LSI yesixhobo esikhulu sase-Korea yaseKorea, esenza iichips ezinengqondo, ikwalindele Yenza imali kwi-5G ukuthengisa izinto ezingaphezulu kumashishini amatsha eya kuthi ngoku ivulelwe ii-modem chips kunye neesenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Imigangatho ye-5G yeemoto ezintle kunye neefektri ezifanelekileyo ukufika esiphelweni se-2019
[APK] Khuphela ngoku i-beta 0.9.5 yePUBG Mobile ekhaba ixesha elitsha